Warbixin Wefdiga Somaliland Ee Uu Hogaaminyo Madaxweyne Ku Xigeenka S-Land Ee Safarka Shaqo Ku Jooga Dalka Imaaradka Carabta – WARSOOR
Abu-dubia (warsoor) – Wefdi uu hoggaminyo madaxweyne ku xigeenka Somaliland ayaa hataan boqosho ku jooga dalka Imaardka Carabta wefdigan oo ah midd aad culus oo ay ku jiraan ilaa 8 wasiir oo ka tirsan xukumda Somaliland iyo xubno kasocda asxaabta mucaaridka ayaa ujeedad safarkani salka ku hayaa ansaxinta dhamaystirka heeshis Meletry oo dhexmara dalka Somaliland iyo Dalka isutaga imaardka carabta heshiiskan ayaa waxaa uu maraya Waji Gabogabo ah la iskuna afgartey.
Wakhtigan xadiirka ee aan warbixintan diyaarinayo waxaan ku suganhay gobta wefdiga Somaliland la dajiyey oo ah goob xaga amaanka aad loo adkeeyey kuna taal madaxtooyada Dalka Imaardka Carbata waxaanada arkeysa sida dalka imaardka carabta u daneeynayso heshiiska meletry oo dhexmara Somaliland iyo Imaardka.
Heeshiskan iskaashiga meletry ee Somaliland iyo imaardka ayaa ah mid labada dhinac si weyn uga baaran dageen isla markaana ay ka qayb qaateen khubro ku xeeldheer arimaha heshiisayada meletry ee calamka oo aan kula kulmey goobta aan hatan ku sugan walow ay ka gaabsadeen mar aan wax kaweydiiyey nuxurka heshiiska.Balse xog hoose ayaa sheegeysa in uu ku jiro qodob aad u weyn kaaso aan farxad galindoonin dalalka iyo xoogaga loolanka siyaadeed kula jira Somaliland.
Heeshiska meletry ee Somaliland iyo Imaardka ayaa ah mid labada dhinacaba ay isku waafaqeen inuu kor uqaadi doono xidhiidhka labada dal,taaso dalka imaardku haatan uu bilaabey olole siyaadeed oo uu ku qaado cid wal oo uu tuhumo in ay heshiiskan carqaldeyn karaan gaar ahaan Dalka Somaliya oo qarka u saraan in imaardku galiyo godoon siyaadeed oo ka dhashey warbiximo ku lidi ah heshiiska oo ka imanya Casimada somaliya Muqdisho.
Heshiskan Meletry ee dhexmarey Dalalka Imaardka Iyo Somaliland oo aad ubaladhan ayaa waxaa si khaasa loogu xusey dadka Deeganka goobaha meletry oo iyagu heshiskani siinayo nasnuujin gaar ah marka laga yimaado Somaliland guud ahaan waxaana warar hoose sheegayaan in dawalada imaardku ay ku qanacadey arinkaa dadka deeganka.
Guud ahaan heshiskan Meletry ee Somaliland iyo Imaardka ayaa ah mid diirada lagu saarey amaanka mandaqada bada-Cas iyadoo xeeldheerayaal aan goobta kula kulmey ii sheegen in dawalada imaardka ku talo jirto in uu beyskani meletry noqdo mid lagu qalabeeyo hub casriya oo lagu diifaaci karo Golf of Aden iyo nawaaxiga Bada Cas.